Qatar Airways na-amalite ụgbọ elu ugboro atọ na-aga Abuja, Nigeria
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Qatar Airways na-amalite ụgbọ elu ugboro atọ na-aga Abuja, Nigeria
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Qatar Airways mara ọkwa na ọ ga-arụ ọrụ ụgbọ elu atọ kwa izu gaa Abuja, Nigeria site na Lagos site na 27 Nọvemba 2020 wee bụrụ ebe ọhụụ nke isii nke ụgbọelu mba nke Qatar na-ekwupụta kemgbe mmalite nke ọrịa a. Ndị ọrụ ụgbọelu a ga-arụ ọrụ ugbu a n'ụgbọelu Boeing 787 Dreamliner nke nwere ụgbọelu na-egosipụta oche 22 na Business Class na oche 232 na Classy Economy.
Qatar Airways Group Chief Executive, Mazị Akbar Al Baker kwuru, sị: “Obi dị anyị ụtọ ịmalite ụgbọ elu n'isi obodo Nigeria. Ebe anyi no ndi Nigeria no na Europe, US na UK, obi di anyi uto ugbua ka anyi na-efega Abuja na mgbakwunye nke ugbo elu anyi di na Lagos nke bidoro n’afọ 2007. Anyị na-ele anya iso ndị anyị na ha na-arụkọ ọrụ ọnụ na-aga n’ihu na-eto nke a. ụzọ na akwado mgbake nke njem na ahia na mpaghara. ”
Site na ụgbọ elu na-aga karịa ebe 85 na Asia-Pacific, Europe, Middle East na North America, ndị njem chọrọ ịga ma ọ bụ si Nigeria nwere ike ịnụ ụtọ njikọta enweghị njikọ site na ọdụ ụgbọ elu kacha mma na Middle East, Hamad International Airport. Ka ọ na-erule ọnwa Disemba, Qatar Airways ga-arụ ọrụ ihe karịrị 65 ụgbọ elu kwa izu gaa njem 20 na Africa, gụnyere Accra, Addis Ababa, Cape Town, Casablanca, Dar es Salaam, Djibouti, Durban, Entebbe, Johannesburg, Kigali, Kilimanjaro, Lagos, Luanda, Maputo, Mogadishu, Nairobi, Seychelles, Tunis, na Zanzibar.
N'ikwekọ na ọrụ ụgbọ elu ahụ na-agbasawanye n'ofe Africa, ndị njem nwere ike na-atụ anya ile ọbịa nke ọma n'Africa na ndị ọrụ ụgbọ mmiri ọtụtụ mmadụ gụnyere ihe karịrị mba 30 Africa. Na mgbakwunye, ndị njem gafere netwọkụ anyị nwekwara ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ihe nkiri Africa, ihe nkiri TV na egwu na Oryx One, Qatar Airways 'in-flight entertainment system.
Ulo oru nke Qatar Airways tinyere otutu mmanu mmanu mmanu mmanu abuo, tinyere ugbo elu nke ugbo elu nke Airbus A350, enyerela ya aka iga n’ihu na-efegharia n’ime nsogbu a nile ma mee ka o dozie ya. N’oge na-adịbeghị anya, ụgbọ elu ahụ wepụtara nnyefe ọhụụ ọhụụ atọ nke ụgbọ elu Airbus A350-1000, na-abawanye ngụkọta ụgbọ mmiri A350 na 52 yana nkezi afọ nke naanị afọ 2.6. N'ihi mmetụta COVID-19 nwere na njem njem, ụgbọ elu ahụ agbanyela ụgbọ mmiri ya nke Airbus A380s n'ihi na ọ bụghị ihe ziri ezi na gburugburu ebe obibi iji rụọ nnukwu ụgbọ elu igwe anọ dị na ahịa ugbu a. Qatar Airways amalitekwala mmemme ohuru nke na-enyere ndị njem aka iji aka ha weghachite ikuku ndị emetụtara na njem ha na njedebe nke ntinye akwụkwọ.
A na-akpọ Qatar Airways ọtụtụ ụgbọ elu na-emeri mmeri, 'World's Best Airline' site na 2019 World Airline Awards, nke Skytrax na-achịkwa. Akpọkwara ya 'Bestgbọ elu kacha mma na Middle East', 'Kasị Mma Ego Kasị Elu Worldwa', na 'Ebe Kasị Mma Azụmaahịa', maka ịkwanyere ahụmịhe azụmaahịa azụmaahịa ya, Qsuite. Nhazi oche Qsuite bụ nhazi 1-2-1, na-enye ndị njem ohere, klaasị zuru ezu, nke ọma na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ngwaahịa. Ọ bụ naanị ụgbọ elu ka enyerela aha 'Skytrax Airline of the Year', nke a ghọtara dị ka ọ kachasị mma na ụlọ ọrụ ụgbọ elu, ugboro ise. Edebere HIA n'oge na-adịbeghị anya 'ọdụ ụgbọ elu kacha mma nke atọ na ụwa', n'etiti ọdụ ụgbọ elu 550 n'ụwa niile, nke Skytrax World Airport Awards 2020.
Ndị njem Qatar Airways si Afrịka nwere ike ịnụ ụtọ ego mmachi akpa ọhụrụ sitere na 46 Kg maka klaasị akụnụba kewara abụọ na 64 Kg kewara ụzọ abụọ na klaasị azụmahịa. Ezubere atụmatụ a iji nye ndị njem ohere mgbanwe na nkasi obi karị mgbe ha na-aga njem na Qatar Airways.
Oge ụgbọ elu Abuja: Wenezdee, Fraịde na Sọnde
Doha (DOH) ruo Abuja (ABV) QR1419 pụrụ: 01:10 abịarute: 11:35
Abuja (ABV) na Doha (DOH) QR1420 pụọ: 16:20 abịarute: 05:35 +1